Dhamaan noocyada kala duwan ee deegaanka ah ee loo baahan yahay kala iibsiga dareeraha saxda ah, madaxa tuubada yar ee la tuuro iyo qalabka micro pipetting ayaa ogaan kara wareejinta dareeraha saxda ah iyo adeegsiga. La jaan qaadi kara inta badan noocyada boodhadhka, Eppendorf, Brand, Gilson, Rainin, Thermo, Krypton tilmaamaha pipette ayaa si otomaatig ah loogu buuxiyaa hal filter hydrophobic ah si looga hortago aerosols iyo dareerayaasha inay gaaraan usheeda dhexe. Intaas waxaa sii dheer, miiraha ayaa ka ilaaliya wasakheynta iskutallaabta udhaxeysa shaybaarka Maaddaama saxnaanta iyo xasaasiyadda saamigu ay mar walba sii kordhayaan, talooyinka la sifeeyey ee la sifeeyey ayaa ku noqnoqonaya goobta shaybaarka.
Lagu soo saaray boqol kun oo qol aan boodh lahayn, habka wax soo saarka ee caadiga ahi wuxuu baabi'inayaa dhammaan ilaha wasakhda dibedda. Tilmaamaha miiraha ee haynta hoose ee Krypton, dib u buuxinta talooyinka shaandhada, talooyinka miiraha dhererka dheer ayaa la heli karaa. Baaxadda mugga waa 10 ul, 20 ul, 100 ul, 200 ul, 1000 ul, 1250 ul, 5 ml ilaa 10 ml. Dhammaan talooyinka shaandhada Krypton waxay ku habboon yihiin PCR, Qpcr, iyo tijaabada tijaabada xasaasiga ah. Waxaa ku nadiifiya E-beam si ay u gaaraan heerka SAL 10-6, RNase-la'aan, DNase-la'aan, Aan-pyrogenic, Aan Sunta lahayn
Xulista maaddada sare ee 'PP' oo hufan oo heer sare ah, qalabka wax loo yaqaan 'modulus' waa mid sarreeya, badeecaddu ma foorareyso.
Darbiga tuubada wax soo saarku waa mid siman, oo aan lahayn ifafaale darbigu sudhan yahay.
Wuxuu dooran karaa madaxa nuugida isagoon shaandheyn ama shaandho lahayn, madaxa nuugista caadiga ah ama madaxa nuugista oo dheereeya, nadiifinta ama nuugista non-jeermiska-dhalidda iyo qeexitaannada kale.
Sifeeyaha haynta aaladda, waxtarka la kordhiyay
Waxay haysaa alaab muunad yar
Dareen xasaasi ah
Midabka jirka tuubada waa la dooran karaa
Waxaa laga sameeyay alaabta ceyriinka ee USP Plastic Class VI Polypropylene
La jaan qaadi kara inta badan noocyada biibiile Eppendorf, Nooca, Gilson, iwm.
Si otomaatig ah u buuxi hal shaandheeye biyo-biyood si looga hortago aerosols iyo cabitaannada inay gaaraan usheeda dhexe
Habka wax soosaarka caadiga ahi wuxuu baabi'iyaa dhammaan ilaha wasakhda dibadda ka imanaya
Baaxadda mugga waxay ka timid 10 ul, 20 ul, 100 ul, 200 ul, 1000 ul
Ku habboon PCR, Qpcr, iyo tijaabada tijaabada xasaasiga ah
E-beled nadiif ah si loo gaaro heerka SAL 10-6
Non-pyrogenic, aan sun ahayn
MAYA. Sharaxaad Mugga Midab Codsiga Madhalays ka dhigida Xirxirida / Ctns
PC0035 Tilmaamaha biibiile 10ul Cad Eppendorf Gilson ikhtiyaari ah 4800
PC0036 Tilmaamaha biibiile 20ul Cad ama jaalle Eppendorf Gilson ikhtiyaari ah 4800
PC0037 Tilmaamaha biibiile 100ul Cad Eppendorf Gilson ikhtiyaari ah 4800
PC0038 Tilmaamaha biibiile 200ul Cad ama jaalle Eppendorf Gilson ikhtiyaari ah 4800
PC0039 Tilmaamaha biibiile 1000ul Cad ama buluug Eppendorf Gilson ikhtiyaari ah 4800
PC1081 Tilmaamaha biibiile 300ul Madow Tecan Hamilton ikhtiyaari ah 4800
PC1082 Tilmaamaha biibiile 1000ul Madow Tecan Hamilton ikhtiyaari ah 4800
Hore: Shaabad saxan
Xiga: PCR Tube
PC0035 10ul talooyin tubbo leh filter PC0036 20ul talooyin buunshaha leh miiraha PC0037 100ul tilmaamoodayda tubbada leh miiraha
PC0038 200ul talooyin tubbo leh miiraha PC0039 1000ul talooyin tubbo leh miiraha PC1082 1000ul tilmaamaha tubbada madow conducitv madow